admin, Author at ALANZAYAR - Page 272 of 295
ကွန်ဒို ကိုဝေဖန်မိလို့ တရားစွဲခံရတဲ့ ကိစ္စကို ဒဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ကိုမောင်မောင်အေး
ကွန်ဒို ကိုဝေဖန်မိလို့ တရားစွဲခံရတဲ့ ကိစ္စကို ဒဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ကိုမောင်မောင်အေး လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း က ကွန်ဒိုမှာ နေထိုင်သူတစ်ချို့က အဆိုပါကွန်ဒိုရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုက်ု သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကနေ ပုံတွေနဲ့အတူ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဝေမျှခဲ့မှုကို ကွန်ဒို ပိုင်ရှင်တွေဘက်က ၆၆ ဃ နဲ့ အမူဖွင့်တိုင်ကြားကာ […]
ဝင်း နဲ့ ဇော်အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ စာတစ်စောင်ရေးသားပေးပို့ အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမေစု ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်မေတ္တာတရားကြီးမားတယ်ဆိုတာ ပြပါပီ။ အဖက်ဖက်က နိမ့်ကျနေတဲ့ နိုင်ငံ ကို ပြုပြင်ပြောင်လဲနေရတဲ့အမေ ဒီလို အခက်အခဲတွေကြားထဲကနေ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိနိုင်ပါပီ။ ပြည်သူတွေက အမေ့ကိုချစ်ကြတယ် […]
ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ (ရုပ်သံဖိုင်)
ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ (ရုပ်သံဖိုင်) ထိုင်းမှာသေဒဏ်ကျခံရမဲ့ ဇော်လင်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထိုင်းရဲကဂွင်ဆင်ဖို့ ပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကိုဝိုင်းရှဲပေးကြပါဦးနော် မြန်မာပြည်သူများသိအောင် များများဝိုင်းရှဲပေးကြပါဦးနော် ဒါသက်သက်ကို ယုတ်မာတာပါ …..မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် နှိပ်ချင်ကြတာက နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပါပဲ…. အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ပီး ကူညီသင့်ပါတယ်….. ဒါသက်သက်လုပ်ကြံခံရတာပါ…. ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ […]
တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ လူတွေပဲဗျာ ၄ တန်းကျောင်းသူလေးကို
တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ လူတွေပဲဗျာ ၄ တန်းကျောင်းသူလေးကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြေးဖို့ ကြံတဲ့ လူယုတ်မာ ၂ ဦးလက်ထဲကနေ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းဆရာမလေး ပရိသတ်ကြီးရေ ခုခေတ်ဆိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာ စက်ဆုပ်ဖွယ် မှုခင်းသတင်းတွေကို ဖတ်ရှုနေကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလည်း ဘာလုပ်မယ်မှန်းမသိပေမဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီ ခရိုင် […]
ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းသူတွေဟာ အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းသူတွေဟာ အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရုပ်ရည်ချောမောလှပတာဟာ ကောင်းကျိုးတွေချည်းနဲ့ ပြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ တော်တော်များများက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမယ်၊ လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေမယ်၊ ငွေရှာလည်း ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အရမ်း လှတဲ့သူတွေတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပြသနာလေးတွေကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ […]
ရန်ကုန်မှာ လုံးဝမနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ချက် (မှန်လွန်းပါတယ်)
ဝင်းနဲ့ ​ဇော်​အတွက်​ခိုင်​မာတဲ့သက်​​သေရှိ​နေပြီ။ ကမ္ဘာက သိလာအောင် ၀ိုင်းရှဲပေးကြပါဗျာ..
ဝင်းနဲ့ ​ဇော်​အတွက်​ခိုင်​မာတဲ့သက်​​သေရှိ​နေပြီ ထိုင်းအစိုးရသို့ ဒီဂစ်တာသမားဘယ်မှာလဲ. သွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာရယ်၊ လက်က ဒဏ်ရာရယ်ကြည့်ရင်သိပြီသူကိုဘာလို့လွတ်ပေးလိုက်တာလဲ။ မင်းတို့လိမ်စဉ်အားလုံးငါတို့တွေအကုန်သိနေတယ်.အရှက်သိက္ခာမရှိတော့ဘူးလားမင်းတို့နိုင်ငံသိက္ခာကျမှာကြောက်လို့ငါတို့နိုင်ငံသားကိုထိုးကြွေးလိုက်တာလဲ။ အားလုံးသိနေတယ်.မင်းတို့ပိုလိမ်လေ မင်းတို့သိက္ခာပိုကျလေဘဲ.သူဘယ်မှာ​နေလဲသူနိုင်ငံတော့​မေ့နေပြီး-လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်​နေ့မနက်ကျွန်းကနေခွာပြီးဘန်ကောက်မှတစ်​ဆင့်သူနိုင်ငံကိုတန်းပြေးတယ်။ ထိုင်းရဲတွေအမှုစစ်နေတဲ့တစ်​လျှောက်လုံးကသက်သေ​နေရာမှာဒီလူကိုဖျောက်ထားတယ်သူ့နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသက်သေထွက်ခိုင်းရင်အဖြေပေါ် ပြီ သူက အဓိကသက်သေပါ။ များများရှဲပေးကြပါခင်မျာ။ သူ့လက်က ဒဏ်ရာနဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာ.ကသက်သေ လုိ့​ပြောနေကြတယ်။​ဒီပုံတွေမှာအဖြေရှိတယ်။ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုက ဝင်းနဲ့ဇော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ၊ လူသတ်မှုဖြစ်ပြီးမနက်အစောကြီးသွေးစွန်းနေတဲ့ဂစ်တာသမား သူလက်က ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနဲ့သေသူရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းက ထိုးသွင်းဒဏ်ရာက တူနေတယ်။ […]
ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန် ယောကျာ်းဖြစ်သူ ရဲ့ အနစ်နာခံနှစ်သိမ့်အားပေးမှုတွေကို ပြောလာတဲ့ မီးမီးခဲ
ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန် ယောကျာ်းဖြစ်သူ ရဲ့ အနစ်နာခံနှစ်သိမ့်အားပေးမှုတွေကို ပြောလာတဲ့ မီးမီးခဲ နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် မီးမီးခဲ ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ သီချင်းလေးတွေက ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိပြီး ပရိသတ်တွေကို သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အသံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားတာကြောင့် သူမ ကို […]
မြန်မာပြည်က ဘဏ်တွေ ပြိုလဲတော့မှာလား
သည်တလောတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကဘဏ်တွေပြိုနိုင်သည်ဟုရေးပြီးအခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကမပြိုနိုင်ဟုရေးပြန်သည်။ဤသို့ဖတ်လာရသောအခါ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းဇော်သန်းဦးကအထက်ပါမေးခွန်းကိုရေး၍ post တင်လိုက်လေတော့၏။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့်သူ့postတွင်comment ၀င်ရေးရလျှင် လွန်စွာရှည်နိုင်သဖြင့် အသစ်ရေးပြီးဤသို့တင်လိုက်ရပါပေ၏။ ဘဏ်များပြိုရခြင်းအခြေခံအကြောင်းတရားများ (၁)ဘဏ်တွင်ငွေအပ်နှံထားသူများက ၄င်းတို့အပ်နှံထားသောငွေများကို တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းတွင် အကုန်ပြန်လည်ထုတ်ယူကြခြင်း၊ (၂)နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ဘဏ်တစ်ဘဏ် အကျပ်အတည်းပေါ်ပြီးပြိုကျသောအခါ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးသည် နိုင်ငံအချင်းချ င်းချိတ်ဆက်ထားသည်ဖြစ်ရာ အခြားနိုင်ငံရှိဘဏ်များလည်းလိုက်လံ၍အကျပ်အတည်းပေါ်ခြင်း, ပြိုကျခြင်း၊ (၃)မဟာစီးပွားပျက်ကပ်နှင့်ကြုံတွေ့ရခြင်း၊ (၄)ဗဟိုဘဏ်မှချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကို ဘဏ်များမှလိုက်နာမှုမရှိအတင့်ရဲစွာစည်းကမ်းချိုးဖော […]
မုဒိန်းကျင့်ပြီး အသတ်ခံရတဲ့ သရဲမ​လေးမြမြ​နေရာက သရုပ်​​ဆောင်​ဖို့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ ကို​ရွေးချယ်​
ဒါရိုက်​တာညိုမင်းလွင်​ပုံ​ဖော်​ရိုက်ကူးမယ့်​” မြ”ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီးမှာ မြမြအဖြစ်​သရုပ်​​ဆောင်​သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က သရုပ်​​ဆောင်​သွားမှာဖြစ်​တယ်​လို့ ဒါရိုက်​တာညိုမင်းလွင်​က အသိ​ပေးလိုက်​ပြီဖြစ်​ပါတယ်​။ “မြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်​ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် က မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးပုံဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “မြ”ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကို စတင်​ရိုက်​ကူးမယ်​လို့ အသိ​ပေးလိုက်​ကတည်းက ပရိသတ်​​တချို့က […]
« 1 … 271 272 273 … 295 »